सानो React उदाह्रण यस्तो देखिन्छ :
यस्ले पेजमा “Hello, world!” शिर्षक प्रद्शर्न गर्छ ।
माथी को लिन्क क्लिक गरी अन्लाईन सम्पादन गर्नुस । केहि परिवर्तन स्वतन्त्र रुपले गरेर, कसरी तिनीहरूले आउटपुट असर पर्छ हेर्नुस । यस गाइडमा प्राय पृष्ठहरू यस प्रकारको सम्पादनयोग्य उदाहरणहरू हुनेछन् ।
यो गाइड कसरी पढ्ने
यस गाईडमा, हामी React apps निर्माण ब्लकहरू जाँच गर्नेछौं: elements and components. एकचोटी तपाईं तिनिहरुमा मास्टर भएपछी, तपाईं साना पुन: प्रयोगयोग्य टुक्राहरूबाट जटिल apps सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।.
यो गाईड व्यक्तिहरूको लागि डिजाईन गरीएको छ जसले step by step अवधारणाहरू सिक्न खोज्छ. यदि तपाईं गरेर सिक्न चाहानुहुन्छ भने, हाम्रो जाँच गर्नुहोस् व्यावहारिक tutorial. तपाइँ यो गाइड र tutorial एक अर्को को पूरक पाउन सक्नुहुन्छ ।
मुख्य React अवधारणाहरूको बारेमा चरण-देखि-चरण गाईडमा यो पहिलो अध्याय हो. तपाईंले नेभिगेशन साइडबारमा यसको सबै अध्यायहरूको सूची फेला पार्न सक्नुहुनेछ । यदि तपाईं मोबाइलबाट यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो स्क्रिनको तल दायाँ कुनामा बटन थिचेर नेभिगेसन पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ ।
यस गाइडको प्रत्येक अध्यायले अघिल्लो अध्यायको ज्ञानमा आधारित छ । तपाईले प्राय: React “मुख्य अवधारणाहरूको” गाईड अध्यायहरू साइडबारमा देखा पर्ने क्रममा पढेर सिक्न सक्नुहुन्छ । उदाहरणको लागी , “JSX परिचय दिदै” यस पछि अर्को अध्याय हो.
ज्ञान स्तर अनुमानहरू
तल Scrolling गरी राख्नुहोस्, र तपाईं यस वेबसाइटको फुटरमा यस गाइडको अर्को अध्यायको लिंक फेला पार्नुहुनेछ ।